Akụkọ - Nyere ndị mmekọ aka ịzụlite ahịa
Esi mmiri ọkụ Valve
Iduzi Free Press Ball Valve
Brass Dabara Adaba
HVAC Usoro Ngwaahịa
Nyere ndị mmekọ aka ịzụlite ahịa
Na February 26,2018, Onye isi oche ahịa Lihong Chen na-eleta ndị mmekọ Bromic Group anyị ogologo oge. Mgbalị kwesịrị imeju afọ iji chọọ ihe ndị mmekọ chọrọ, nyere onye ọlụlụ aka ịzụlite ahịa.Main mepụta gụnyere: Multi Tụkwasịnụ Tụkwasịnụ Valves;F1960&F1807 Brass Fittings ; Bọọlụ ọlavalvụ, wdg. Ndị dị ka Home Depot, Apollo, Watts, tec.Our ahịa nwere afọ ojuju na ngwaahịa na ọrụ anyị dị elu.
Anyị na-esi ọnwụ na anyị na ụlọ ọrụ ụkpụrụ nke "Ahịa mbụ, Quality Dabere" na ga-anọgide na-egosipụta ezi obi azụmahịa imekọ ihe ọnụ na onye ọ bụla ahịa.
Ugbu a ọha mmadụ bụ oge nke ihe ọmụma gbawara, ụlọ ọrụ dị na ngwaahịa agaghị ekwe omume izute ndị asọmpi, asọmpi ụlọ ọrụ, maka ụfọdụ ụlọ ọrụ, ọ bụ ihe dị mma. N'ihi asọmpi, ụlọ ọrụ emeela ka mma ngwaahịa na mma nke ọrụ, na-eji ọkụ nwetara mma ma ọ bụ karịa oriri na ọrụ na obere ego….
Ahia bu “sieve”. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-emepe ma na-aga n'ihu, ahịa na-emeri asọmpi na ụlọ ọrụ ahụ. China abụrụla ụlọ ọrụ na-emepụta ụwa, yana kwa nnukwu mba na imepụta mgbapụta na nrụpụta valvụ. Na narị afọ ọhụrụ, ụlọ ọrụ mgbapụta na ụlọ ọrụ valvụ nke China emeela ngwa ngwa, mana na-echekwa asọmpi dị egwu na nnukwu nsogbu.
Naanị ụlọ ọrụ mgbapụta na ụlọ ọrụ valvụ nwere ike ịghọta nke ọma na ọnọdụ dị ugbu a nke ụlọ ọrụ ahụ, na-emeziwanye ngwaahịa ha mgbe niile, na-eme ka echiche nke nchekasị sie ike, na-ewusi ọdịbendị ụlọ ọrụ na echiche nke ọrụ ahịa….
Site na agbamume na nkwado nke amụma mba, Shanghai, Fujian na Zhejiang na-agbasi mbọ ike iji kwalite mgbanwe na mmelite nke ụlọ ọrụ mgbapụta na valvụ, gụnyere ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị nwe obodo, ụlọ ọrụ ndị si mba ọzọ na njikọta ọnụ.
Ulo oru uzo nke ulo oru valve nke China sara mbara. Ọdịnihu nke mgbapụta na ụlọ ọrụ valvụ doro anya. Site na ahụmịhe gara aga, njedebe dị ala nke ụlọ ọrụ valvụ China nwere isi nweta mpaghara. Ulo oru ndi ozo di na etiti na njedebe di elu ji nke nta nke nta dochie mbubata ya na uru onu ahia, uzo na oru, ma choro isonye na ahia mba uwa iji sonye aka na ahia mba uwa.
Post oge: Sep-18-2020